Mayelana NATHI - Mestech Industrial Limited
Umenzi wesikhunta nomhlinzeki wezixazululo, eChina
Kusukela yasungulwa, iMestech izibophezele ekunikezeni amakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisebenza kahle futhi ezisezingeni eliphakeme. Sineqembu lochwepheshe labanjiniyela, imishini ehlome kahle nohlelo lokuphatha olusebenzayo. Sihlala sisebenzisa ubuchwepheshe obusha nezindlela zokuphatha ukunqwabelanisa ulwazi ekukhiqizeni isikhunta sepulasitiki, ukukhiqiza umjovo, ukukhipha izinsimbi, ukuklanywa komkhiqizo nomhlangano womkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Ngamandla aholayo, kubonakala ikakhulu kulezi zici ezilandelayo:
Onjiniyela ithimba lethu
Onjiniyela bethu banesipiliyoni esicebile ekwakhiweni nasekukhiqizeni inqubo yezingxenye zepulasitiki, izingxenye zensimbi nezikhunta. Basebenzisa isoftware ukuklama isikhunta nemikhiqizo. Bayakwazi ukuhlinzeka amakhasimende ngomklamo womkhiqizo, ukuhlaziywa kokungenzeka, ukuhlolwa kobungozi kanye nezixazululo.
Onjiniyela beMestech bangasebenzisa ngobuciko i-UG, PROE, iMoldflow namanye amasoftware ekwakheni nasekuhlaziyeni isikhunta. Izikhunta esizenzayo zimboza izingxenye zezimoto, izingxenye zemishini yezokwelapha, izingxenye zomkhiqizo we-elekthronikhi, izinto zasendlini, ugesi wezimboni, ukuvikelwa kwemvelo nezidingo zansuku zonke. Siyakwazi ukuklama nokukhiqiza isikhunta esijwayelekile se-HASCO ne-DEM ngokuya ngezidingo zamakhasimende, bese sizithumela kwamanye amazwe nezifunda.
Onjiniyela beMestech bangasebenza namakhasimende ukuhlinzeka ngengxenye yepulasitiki yokwakheka nengxenye yensimbi yemikhiqizo kagesi nemikhiqizo kagesi, futhi benze ukuhlaziywa kokusebenza, baxoxe futhi bathole izinkinga futhi banikeze iziphakamiso zokwenza ngcono, kanye nokwakhiwa kwesikhunta nokukhiqizwa kulezi zigaba ezilandelayo.
Sineqembu lobunjiniyela, benza ukuklanywa kwemikhiqizo nokwakhiwa kwesikhunta nokulandelwa kwephrojekthi. Uma unephrojekthi entsha ezandleni zakho edinga ukuthuthukisa isikhunta sepulasitiki nezingxenye ezibunjiwe ngomjovo, sicela uxhumane nethimba lethu lobuchwepheshe, sizobuyekeza idatha yakho bese sikuthumela isiphakamiso esithile sokwengeza ukwakheka kwengxenye yakho, lokhu kuzoqinisekisa ukuthi iphrojekthi yakho izobe kuphumelele ngesikhathi sokukhiqiza isikhunta futhi ugcine isikhathi esiningi sokwenza isikhunta.
Ifektri yethu kanye nezinto zokusebenza
Isikhunta nokubumba umjovo kanye nensimbi yokulingisa kufa kuncike kakhulu ezingeni lemishini.
Ku-workshop yesikhunta, ngaphezu konjiniyela bokuklama abangochwepheshe, onjiniyela bezinqubo namakhosi wesikhunta, inkampani yethu ilandela ngenkuthalo ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme bokucutshungulwa kwamanje, ifakwe amathuluzi womshini we-CNC athuthukile, imishini yokwakha inhlansi ye-EDM, amathuluzi womshini wokusika izintambo. Ijubane lokucubungula ithuluzi lethu lomshini we-CNC elisheshayo lingafinyelela ku-24000rpm.
Ngaphezu kwezinhlobo ezijwayelekile zesikhunta, senza nesikhunta esinemibala emibili, setha isikhunta sikabhiya bese sifaka isikhunta, siqokomisa isikhunta, futhi senze isikhunta esikhulu ngaphakathi kwamamitha amathathu.
Mayelana nomjovo wokubumba, sinemishini yokubumba umjovo kusuka kumathani ayi-100 kuye kumathani ayi-2000, imishini yokubumba umjovo wemibala emibili nemishini yokubumba umjovo kagesi esheshayo. Ngaphezu udini umjovo ka izingxenye usayizi jikelele plastic, singakwazi ukukhiqiza izingxenye ezimbili-umbala, izingxenye mncane-ngodonga futhi ezinkulu-usayizi izingxenye. Izingxenye ezibunjiwe zingaba ngamamitha ayi-1.5 ubude kuthi ukuqina kwengxenye ye-thinnest kube ngu-0.50 mm
Sinemishini engu-32 yomjovo lapho amabutho abambelela khona ahlanganisa i-90T ~ 2000T, umshini wokujova kabili, onabasebenzi abangama-50 ~ 60. Amandla wokukhiqiza izingxenye eziyizigidi eziyi-1.5 ngenyanga.
I-die cast workshop
Emkhakheni wensimbi obumba, singahlinzeka ngomkhiqizo wokufa wokuphonsa we-zinc alloy ne-aluminium alloy, kanye nokuchofoza ngokunemba kwezinye izingxenye zensimbi. (sicela ubheke ikhasi "metal die casting" kanye ne- "CNC machining" ukuthola imininingwane.)
Sethula ukuphathwa kwamaphrojekthi kanye nohlelo lwe-ERP enqubeni yokukhiqiza neyokwenza. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, senza uhlelo lwesikhathi futhi sithuthukise inqubo kusuka ekwakhiweni, ekuthengweni kwempahla ekucubunguleni, ekukhiqizeni, ekuhlolweni nasekuthumeleni, ukuze kunciphise isikhathi sokwakha nokunciphisa izindleko zesikhunta sakho nokukhiqizwa kwakho.
Ikhwalithi iyimfanelo ebalulekile yokuqinisekisa ukusebenza kwemikhiqizo. Sisungule uhlelo oluphelele lwekhwalithi futhi sahlela izinqubo namazinga wekhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ekhiqizwayo ihlangabezana nezidingo zamakhasimende, nokuqinisekisa ukuthi ukukhishwa kwemikhiqizo efanelekayo kumakhasimende. Faka phakathi
Esigabeni sokukhiqiza isikhunta, besilokhu sihlola ngenkuthalo ikhwalithi kusukela kumklamo wesikhunta
1. Ukuhlaziywa kolwazi kwezidingo zamakhasimende
2. Isikhunta design nokwenzeka ukubuyekeza
3. Isikhunta idizayini design
4. Isikhunta sokugcina sokuqinisekisa
5. Ukungena okungenayo kwesikhunta sensimbi
6. Die machining ubukhulu nesilinganiso
7. Ukukala usayizi we-electrode osetshenziswayo
8. Isikhunta test kanye nokuhlola
9. Ukuhlolwa kokukhiqizwa kokulingwa
1. Ukuqinisekiswa kwezingxenye ezifanelekile namasampula wokukhiqiza
2. Ukuhlolwa kweMisa ukuhlolwa kwendatshana yokuqala
3. Ukuhlolwa kokukhiqizwa
4.Ukuhlolwa okuphelele kanye nesheke lokuthunyelwa kwempahla
5. Ukulandelwa kwekhwalithi
Sineqembu le-QC, nemishini yokuhlola neyokulinganisa: Umshini Wokulinganisa we-3D Coordinate kanye nomhloli wombala.
Ithimba lethu lohwebo lokuthekelisa
IMestech isebenza nabalingani abavela emazweni amaningi iminyaka eminingi, sibenzela isikhunta esezingeni elijwayelekile nemikhiqizo yabo, kanye nesevisi eyodwa. Sihlangabezane neqembu langaphandle lokuhweba. Bayazi ubuchwepheshe bemikhiqizo futhi bangaxoxa nawe ngezindaba zokwakhiwa, inqubo, ezamabhizinisi nezokuthuthwa kwempahla ngesiNgisi. Bangaqonda kahle izidingo zakho futhi bakunikeze ngemikhiqizo nezinsizakalo ezifika ngesikhathi nezinembile.